I-Kash Doll i-Nude kunye ne-Sexy Pics kunye neVidiyo yeVidiyo evuthiweyo - Iphonografi Yoosaziwayo
U-Ashley C Williams
I-Kash Doll i-Nude kunye ne-Sexy Pics kunye neVidiyo yeVidiyo evuthiweyo
Nalu olona qokelelo lukhulu kwi-intanethi, lomrepha odumileyo, imodeli kunye nomqambi wangaphambili uKash Doll ohamba ze kunye nemifanekiso engamanyala, ividiyo yakhe yesini evulekileyo yesondo kunye nevidiyo engasebenziyo ye-Instagram! I-esile lakhe elikhulu kunye neebhloko zeplastiki ezinkulu zifanelwe lixesha lakho kunye nebhoner…
U-Kash Doll yiminyaka eyi-27 ye-rapper yaseMelika, esayinwe kwiRiphabhlikhi yeRekhodi kwaye igama lakhe lokwenyani nguArkeisha Antoinette Knight. Waziwa kakhulu ngeengoma zakhe ezithi 'Wonke umntu' kunye ne 'Ice Me Out'. Elokugqibela laba lelona likhokelayo kwi-albhamu yakhe yokuqala eStacked. UKash Doll usebenzisene nabazobi kubandakanya iMeek Mill, IBig Sean , Iggy Azalea, K Michelle, kunye noHamba Walker.
UKash Doll uvela eMichigan. Waqala ukusebenza esemncinci ukunceda umama wakhe ongenaqabane ukuba axhase usapho lwabo. UKash wayefuna ukudlwengula ukususela ebuntwaneni kwaye waqala ukubhala ngokukhululekileyo kunye nokubhala iingoma esemncinci kakhulu. Wayesebenza njengomhluli ngaphambi kokuba abe yimodeli, kwaye kamva wazama ukungena kumzi mveliso we-rap. U-Kash Doll uye wawisa umntu ongatshatanga obizwa ngokuba yi 'Freestyle'.
UKash Doll uvuza iteyiphu yesondo
Nantsi i-rapa ebony Arkeisha Antoinette Knight uhamba ze kumxholo wakhe ocacileyo ocacileyo. Intombazana yethu yetshokholethi e-Kash Doll ibonise i-butt yakhe enkulu kunye ne-boobs kwividiyo yakhe yabucala yesondo! U-Kash ubonwa enxibe iimpahla zangaphantsi ezimnyama, njengoko le ndoda inyanzela inja kwaye irekhoda ividiyo. Uyancwina kwaye uthetha ngokungcola kuye, efuna ukukhutshwa ngakumbi. Emva koko usinika uninzi lwee-creampies kunye nemfihlo eninzi emhlophe kwilungu lakhe lobufazi! Uyakholelwa okanye ungakholelwa, ndingathanda ukuncanca kwimilebe yakhe yeengono ngelixa zimanzi zonke. Bukela i-Kash Doll ihamba ze-esile kunye ne-pussy, njengoko inkuku enkulu emnyama imenza nzima! Impundu yakhe iyakhanya ngelixa ethatha idick!
Jonga owona mfazi mnyama uthandwayo usandula ukuvuza: USerena Williams imifanekiso enganxibanga kunye nesini !
I-Kash Doll kunye nemifanekiso engamanyala
Emva koko sinengqokelela enkulu yeKash Doll enganxibanga kunye nemifanekiso engenanto ayenzele amaphephancwadi. Kwakhona, uninzi olunomdla olushushu nolushushu, imifanekiso ehamba ze. Eli bhinqa limnyama limnyama linokuphambanisa wonke umntu ngeebhoob zakhe ezinoburharha kunye nokuphangwa. Uyakuthanda ukujija njengabo bonke abantu abadumileyo abamnyama, uyathanda ukunika iimpundu zakhe kubaphulaphuli. Wonke umntu owayekade ephanga wamkelekile ku Mostra Musa. Sifuna nje ukuba adanise ngeenxa zonke kwipali kwaye ayifake kwi-esile yakho ukuba kunokwenzeka!
Ividiyo yeKash Doll nip
Kwaye sikwaneklip entsha ye-Kash Doll nip slip kwi-akhawunti yakhe ye-Instagram. Wayefota ividiyo yokudanisa bukhoma kwaye engakhathali ngokwaneleyo, ke iisuti zakhe zaphuma emzimbeni wakhe. Iibhloko ezimnyama neengono zamenyezela, kwaye wayothukile kakhulu. Andothuki, ngoba le ebony iyathanda ukubonisa umzimba wayo uhamba ze!
Katie clarkson induli ihamba ze
kelly brooks imifanekiso enganxibanga
Iibhanki zika-sasha zinganxibanga
hilary duff iifoto ze